Mandehandeha any Tenerife, inona no ho hita ao amin'ny nosy | Vaovao momba ny dia
Mitsangatsangana any Tenerife, izay ho hita eto amin'ny nosy
Tenerife dia iray amin'ny toeran-kaleha mahazatra eto amin'ny firenentsika, ary akaiky izy io, toerana mora vidy ary mankafy fotoana be saika mandavantaona. Ka mazava ho azy fa mety ho safidy tsara ny mankafy ny torapasika sy zavatra maro hafa. Satria, na dia tadiavina any Tenerife aza ny fizahan-tany amoron-dranomasina dia mbola betsaka ny zavatra hita eto amin'ny nosy.
Lazainay aminao izay ho hitanao ao amin'ny Nosy Tenerife raha te-hitsangatsangana amin'ity toerana ity ianao. Ary ny hoe avy amin'ny valan-drano ka hatrany amin'ny faritra fialamboly, habaka voajanahary ary mazava ho azy ny morontsiraka izay tsy tokony halahelo antsika. Ny hevitra tsara dia ny manofa fiara hivezivezy manerana ny nosy, satria tsy maintsy mandeha ianao mba hahitana ireo toerana mahaliana indrindra azy, na dia mijanona ao amin'ny faritra fizahan-tany indrindra aza izy ireo.
1 Torohevitra handehanana any Tenerife
2 Ilay Teide
3 Valan-javaboary fialamboly
Torohevitra handehanana any Tenerife
Ny fahazoana mankany Tenerife dia tena mora, ary misy maromaro orinasa mora vidy izay manana sidina mankany amin'ity nosy ity. Ny sasany amin'izy ireo dia mandeha amin'ny seranam-piaramanidina avaratra Tenerife ary ny sasany mankany Tenerife atsimo. Na izany aza, dia mety raha manofa trano ianao, satria ho tsara kokoa amintsika ny hivezivezy manerana ny nosy ary hahita ny toerana toa ny Mount Teide, izay eo afovoany indrindra. Miaraka amin'ny fiara dia afaka mijanona amin'ny toerana misy ny jeografia misy azy isika, na amin'ny morontsiraka sy ny teboka izay tsy dia feno fizahantany loatra, noho izany dia toa hevitra tsara izany.
El Teide National Park Iray amin'ireo toerana mahavariana indrindra hitsidihantsika eto amin'ity nosy ity. Miaraka amin'ny tontolon'ny volokano izay hanao sahala amin'ny antsika kilometatra an'arivony avy any an-trano, amin'ny haben'ny volana na any an'efitra. Toerana iray izay mahatonga antsika gaga noho ny fiovana amin'ny natiora ka hatramin'ny faritra maina indrindra. Misy bisy hahatongavana any, fa afaka mandeha fiara koa isika, mankafy ny manodidina ny volkano. Rehefa tonga izahay dia afaka mitondra ny tariby mankany amin'ny faritra ambony. Dia iray izay tsy maintsy hiatrehantsika milahatra, satria io no iray amin'ireo manintona indrindra ny nosy.
Ho tonga eo an-tampony isika ary tsara kokoa ny manangona, satria na dia mafana aza ny moron-dranomasin'i Tenerife, amin'ity faritra ity dia midina be ny mari-pana. Azontsika atao ny mahita ny ampahany amin'ny ankapobeny, fa ho miakatra amin'ny tampony ny volokano dia mila mangataka fahazoan-dàlana mialoha ianao. Mazava ho azy fa mideza ny lalana ary somary sarotra raha toa ka be rivotra. Mbola mendrika ny andramana. Matetika ny fomba fijery dia mahavariana, na dia avy any amin'ny faritra afovoany aza, indrindra raha tsara vintana isika fa tsy misy zavona amin'io andro io.
Ao Tenerife dia misy valan-javaboary roa malaza, ny iray misy biby ary ny iray hafa misy rano. Janoaryl Loro Parque, hita any avaratry ny nosy, dia hahita zaridaina misy lohahevitra na zoo misy karazany maro isika. Ny iray amin'ireo zavatra mety mampino indrindra dia ny mahita ireo trozona mpamono olona. Ao amin'ny zoo dia misy ny chimpanzees, feso, jaguars na otter ka hatramin'ny karazam-borona, biby mandady na trondro rehetra. Fitsidihana lehibe ho an'ny fianakaviana, hahafantaran'ny ankizy zavatra momba ny biby ao amin'ny planeta sy ireo biby monina ao aminy.
Valan-javaboary hafa iray hafa tanteraka ny Valan-javaboary Siam, dia hita any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ity dia valan-javaboary iray malaza indrindra, iray amin'ireo tsara indrindra, ary toerana hahitanay rano manintona hampangatsiaka sy handany ny andro amin'ny fahafinaretana be. Fitsidihana iray hafa tena ilaina raha mandeha miaraka amin'ny ankizy isika fa tsy ankizy.
Raha misy zavatra tianay ho hita rehefa tonga any Tenerife isika dia ny morontsirak'izany satria ny fizahan-tany dia mifantoka tanteraka amin'izy ireo noho ny toetr'andro. ny Tora-pasika Los Cristianos Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra, na dia hahita fizahan-tany be dia be aza isika satria any amin'ny faritra somary be olona io. Ny torapasika Troya dia ao Costa Adeje, misy fasika volamena, ary toerana mety hankafizana fanatanjahantena anaty rano. Ny moron-dranomasin'i Las Gaviotas, any Santa Cruz de Tenerife dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra, ary koa manana ny fasika mainty izay mampiavaka ny faritra misy volkano. Izany no antony iray mahaliana indrindra rehefa mitsidika ny morontsirak'i Tenerife. Las Teresitas, ihany koa ao an-drenivohitra, dia iray amin'ireo morontsiraka fizahan-tany, mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo, izay manana karazana tolotra rehetra, manomboka amin'ny trano fisakafoanana ka hatrany amin'ny fatana masoandro. Ankoatra ny renivohitra dia manana ny morontsirak'i El Roque isika, miaraka amin'ireo vatolampy antsoina hoe Los Roques de Anaga. Ity moron-dranomasina ity dia miompana kokoa amin'ny surf sy ny olona mahalala ny ranomasina, satria manana onja bebe kokoa izy io. Araka ny hitanao, ao Tenerife dia misy karazana moron-dranomasina rehetra, manomboka amin'ny vitsy olona ka hatramin'ny hafa misy serivisy sy rivo-piainana mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mitsangatsangana any Tenerife, izay ho hita eto amin'ny nosy
Zava-mahaliana 5 tsy dia fantatra nefa tsy hay hadinoina tany Roma